Hiran State - News: Imaatinga gudoomiyaha baarlamaanka uu yimid Mogdisho oo kilkishay magaalada.
Imaatinga gudoomiyaha baarlamaanka uu yimid Mogdisho oo kilkishay magaalada.
Mogdisho: (hiranstate.com)-Gudoomiyaha baarlamaanka oo taageero dhaqaalo iyo mid siyaasadeedba ka helaya beesha caalamka ayaa ku dhawaaqay inuu diyaariyey gudi soo diyaariya doorashada dalka ka dhici doonta bilaha inagu soo aadan.
Baarlamaanka Somaliya ayaa qorsheynaya in hadii madaxweynaha iyo r/wasaaraha ay soo fara gashtaan howlaha baarlamaanka in qorshahu yahay in midkood ay xilka ka tuuran inta aanba la gaarin dhamaadka bisha April ee inagu soo aadan.siyaasadaha hada ka socda gudaha magaalada Mogdisho ayaa u muuqaal ek siyaasadahii dhawr sano ka hor ka socday dalkaasi Jabouti oo madaxweynaha Somaliya loogu doortay Shiikh Shariif.
Imaatinka gudoomiyaha baarlamaanka Shariif Hasan maanta ku yimid Mogdisho waxey kilkishay siyaasada ka jirta halkaasi kedib markii uu wareysi gaaban oo uu siiyey saxaafada ku sheegay inuu diyaariyey gudigii qaban qabin lahaa doorashada madaxweynaha Somaliya ee dhici doonta dhawaantan. laakinse hadalkaasi waxa daba socda dadaalo kale oo xilka looga qaadayo madaxweyanaha Somaliya iyadoo loo cuskan doono xilka ka qaadistiisa inuu ka gaabiyey inuu wax ka qabto amaanka caasimada mudo labo sano ah halka uu kooxahan dagaal ku bilaabay dhawrkii bilood ee ina dhaaftay oo kaliya oo dagaaladani hada xowliga ku socda loo baahnaa mar hore, iyagoo aaminsan dagaaladani hada socda ineysan meel gaareyn oo ay madaxweynaha iyo xukumada Farmaajo ka tahay mid siyaasadeed oo aan leysku haleyn karin waqti dheer.
Warar kale waxey sheegayaan in madaxweynaha iyo xukumada hada jirta ay ka gaabiyeen iney hanaanka dowlada federalka gaarsiiyaan gobolada dalka sidaasi daraadeed waxey u badan tahay iyadoo dano siyaasadeed oo qarsoon ay jiraan si deg deg ah looga taqalusiyo hogaanka hada jiro iyadoo midkood uu baarlamaanka hor tagi doono dhawrka isbuuc ee inagu soo aadan wado kasta oo loo maraba.
Dowlada hada jirta uma muuqaal eka mid ka bad baadi doonto kacdoonka iyo kulufka siyaasadeed ee ka jira baarlamaanka dhexdiisa tiiyoo aduunyadii ay garab siinayaan baarlamaanka Somaliya oo ay u dhega nugul yahiin warkooda sidii ay labo sano ka hor ugu dhega nuglaayeen kooxdii Asmara ee uu hogaamineyey madaxweynaha hada talada haya waa Shiikh Shariife. waliba xiligaasi baarlamaankii oo Baydhabo jooga ayaa intii la rabay jabouti la geeyey intii kalena wey ku qasbanaaden iyagoon rabin Jabouti inuu shir ka dhaco hadase howshu wey ka sahlan tahay sidii hore oo baarlamaankii oo dhan hal meel ayuu joogaa ciidamo amaankooda ilaaliyo oo African ahne wey heystaan howshooda wey adag tahay in la hor istaago ayuu yiri mid ka mid ah xildhibanada baarlamaanka Somaliya.
Marka laga soo tago siyaasada dowlada hadane shacabka Somaliyeed dal iyo diba waxey ka wadaan sidii ay degaanadooda ugu sameysan lahaayeen maamul goboleedyo maadama ay dowlada mida hada jirta bedeli doonta noqon doonta dowlad aan awood laheyn halka ay maamul goboleedyada ka noqon doonan kuwa awood leh oo waxkasta u dhan yahiin. Inkasta oo ay xukumada hada jirto iska indha tireyso waxey meesha ka bixi doontaa iyadoo ay wax badan qabyo ka yahiin.
· admin on March 24 2011 13:19:48 · 0 Comments · 1853 Reads ·
14,613,333 unique visits